Tao anatin` izay, nijanona tao an-tranony ny ankamaroan'ny Malagasy; izao mbola hitohy 15 andro indray ny hamehana ara-pahasalamana, izay midika fa mbola voafetra ny fahafahana mivezivezy sy miasa. Ny ankamaroan` ny orinasa dia voatery nikatona kanefa tsy maintsy nandoa ny karaman` ny mpiasa. Misy amin` izy ireo no niditra “chômage technique ». Noho ny fihibohana maharitra dia lasa “congé forcé » ireo mpiasa ka manahy amin` ny . Izany dia misy akony goavana aminà tokantrano maro. Na dia eo aza ny fanampiana sy tohana avy amin ireo mpamatsy vola dia ho maro ireo Malagasy tsy ho tafarina raha mbola mitohy izany krizy ara-pahasalamana izany, ary ny seha-pihariana rehetra mihitsy no tratry ny krizy. Na inona na inona fanapahan-kevitra horaisin'ny fanjakana dia tsy maintsy misy drafitra hanarenana ny toekarena izany, tahaka ny nataona firenena maro maneran-tany niatrika ny fihibohana.Tsy maintsy manampy ny sehatra tsy miankina ny fanjakana nadia anaty fotoana voafetra ihany aza; fanamaivanana ny hetra aloa na fanampiana ara-bola tsotra izao, azo atao daholo izany. Mifanindran-dalana amin'izay tsy maintsy tohizana ny tohana ara-tsosialy ho an'ny vahoaka; fotoana tena mety izao hampandehanana ny Tsena mora, fa tsy hionona amin'ny resaka Vatsy Tsinjo fotsiny.Tena mitombo isa mantsy ireo fianakaviana sahirana amin'izao fotoana fa tsy tahaka ny tany aloha intsony.